Amathoni wezingane ezincane
Njalo kwakuyizithombe zezingane ezincane ezazingenye yezinto zokuzijabulisa ezizithandayo kakhulu. Noma kunjalo, abazali banamuhla baqala ukukhathazeka nokunciphisa ukubuka kwabo, bekholelwa ukuthi amakhathuni anethonya elibi kwengqondo yengane ngenxa yokudweba okubi, ubudlova nokunye okuningi. Kodwa ingabe akukho cartoon enhle yezingane ezincane?
Amakhodwedi aseSoviet - anomusa futhi aqhakazile
Yiqiniso, kunezithombe eziningi ezidinga ukuboniswa ezinganeni. Okokuqala, lezi zithombe ezinomusa, ezikhanyayo nezikhanyayo. Isibonelo, izazi zengqondo zeluleka ukuveza izidwebe ezinhle kangaka njenge "Umka", "Little Raccoon", "Prostokvashino", "I-Adventures kaWinnie the Pooh", "I-Adventures yeKuzi kaKhaya," "I-Adventures yeCape Leopold." Akumangazi ukuthi amathonti anjalo anconywa izingane. Ukubukeka okucacile kodwa okungacasulayo izithombe nezihloko ezithuthukisa ubungane kanye nokusizana ngokubambisana kuthinta impilo yengane yengane, ishiya emqondweni wengqondo yengane ngokuqondene nenembeza, ukwethembeka, umusa, ubungane.
Abanye abazali baze banqabe izingane ukuba zibukele i-TV. Lesi sinqumo asikho emthethweni kakhulu, ngoba yizithombe eziba yithuba lokuthola izimpendulo zemibuzo eminingi. Ngaphezu kwalokho, ubukela ukuthi yiziphi izinhlamvu ezinjengabantwana, ungakwazi ukunquma ukuthi ingane izwa kanjani, ngoba uma ukhetha umlingisi, uyaziqhenya ngokungazi.
Izingane eziningi zinomkhuba wokubukeza i-cartoon efanayo izikhathi eziyikhulu. Kulokhu futhi akukho lutho lokukhathazeka ngalo. Ungakhohlwa ukuthi sonke siyakuthanda ukubukela nokufunda amafilimu nezintandokazi eziningi. Kungabantwana abancane abanayo ukukhetha okunjalo okukhulu, ngoba abazange babe nesikhathi sokubona, yingakho abazali babo bengakhathaleli lutho ngaphandle komdwebo owodwa.
Izithombe zekhwalithi ezinhle zinencazelo yefilosofi, efinyeleleka futhi eqondakalayo kubantwana. Uma ingane ibukeza i-cartoon, ke ifuna ukubhekana nesihloko esibonisa. Uma ebheka okufanayo, kulula kuba.
Criterion yokukhetha i-kathathu
Abazali abaningi abazi ukuthi yikuphi okungcono ukukhetha amathoni kubantwana abancane. Eqinisweni, akukho ukuhlukaniswa okucacile phakathi kwezithombe ezimbi nezimbi. Kulula, eziningi zazo aziklanyelwe izethameli zezingane. Isibonelo, izithombe ezifana nalezi "The Corpse Bride" noma "The Nightmare Ngaphambi Kokushona" akunakubizwa ngokuthi kubi futhi ezingezansi. Ngokuphambene nalokho, lawa amathangi amnandi agcwele ukufanekisa, ama-undertones afihlekile, amahlaya nomusa. Ama-cartoons anjalo abalwa okungenani kubalaleli abasha. Ukuze uqonde kahle imidwebo enjalo, umuntu kufanele abe nolwazi olwanele nolwazi. Ingane encane ayinayo nje. Yingakho ama-cartoons aloluhlobo futhi angathandeki ngokubukela izilaleli zezingane. Ama-albhamu angokwalesi sigaba sezithombe. Abazali abaningi bakholelwa ukuthi kunezimpi eziningi nezilo. Eqinisweni, ku-anime isiko kunezinto eziningi zobuciko eziyiqiniso eziphakamisa izinkinga zothando, ubungane, ukukhwabanisa, ukulahlekelwa, ukuhlalisana kwabantu kanye nokuningi. Kodwa futhi, ukuze aqonde i-anime, ingane kufanele ifike eminyakeni yobudala. Nakuba kunezinhlayiyana phakathi kwe-anime engaboniswa ezinganeni, isibonelo, njengokuthi "Candy, Candy" - i-anime, abaningi abakhumbulayo kusukela ebuntwaneni.
Kumele futhi kuqaphele ukuthi izingane akufanele zivunyelwe ukubuka amathangi lapho kukhona khona ukufa. Empeleni, eminyakeni emine kuya kwemihlanu ingane ifuna izimpendulo zemibuzo mayelana nokufa. Futhi udinga ukubanika, ngendlela nje angaqonda ngayo futhi aqonde ulwazi olutholiwe.
Futhi ekugcineni, amathiphu ambalwa okuyiwona amakhophi angcono kakhulu kubantwana abaneminyaka ehlukene.
Kuze kube yiminyaka emithathu: i-katuni lapho kunezingoma nezinkondlo, amathoni ngezilwane, lapho kunolwazi oluncane khona.
Kusukela eminyakeni emithathu kuze kube sesikhathini samabanga asekuqaleni: iziculi mayelana nobungane, ubudlelwane nabangane, ngaphandle kokuqondakala iminyaka yobudala obunikeziwe.
Ngokweminyaka yesikole esincane: amathontizi mayelana nokuzidela, ubungane, ubutha, umthwalo wemfanelo, unembeza.
Ezentsha: amathangi ngokuphila okubalulekile, impilo, smetti, uthando, ubudlelwane.
Indlela yokufundisa ingane ukufunda imbala
Indodakazi kababa: Uthando lukababa
IsiNgisi ngu-Glen Doman indlela
Ukuze udumise nhlobo, ukujezisa ngasese
Indlela yokukhulisa ingane enethalente nehlakaniphile
Ukuthuthukiswa, ukukhuliswa nokubunjwa kobuntu bentchooler
Imidlalo yesimo nokuzijabulisa kwezingane
Ukuhlunga i-Philippine: izinkomba nezinhlobo
Amavithamini nsuku zonke kwabesifazane abakhulelwe
Shish kebab esesibindi
Indlela yokulahlekelwa isisindo kwimifino emavikini amabili
Ukuchazwa kwamaphupho: Yini inkomo ephupha ngayo?
Indlela yokwenza i-ghee ekhaya
Ingabe uDmitry Hvorostovsky unqoba umdlavuza?
Ukubhebhetheka kokungcola kuya ezidakeni
Ukuthandana ngokubona kwamadoda wanamuhla
I-Syphilis kwabesifazane: izimpawu, izingozi, ukwelashwa
Ukunakekelwa kahle ekhaya
Izibonakaliso eziyinhloko zokuxolisa ekuziphatheni kwamadoda
Imaski yesikhumba senkinga, ubuso obusweni bezintambo
Kungani abantu benesizungu?
Ungalandela kanjani ngokufanele ukuthunyelwe?
I-pudding yamabhanana emifino